Fumana iimpendulo zale mibuzo ebuzwa rhoqo
Ngoko ke kusebenza njani?
Yintoni icebo na ninikela apha?
Ngaba i ucele kwemali?
Ngaba i angacela ukuba iingcebiso wokulinga?
Emva kokwenza iintlawulo, njani kwaye yintoni ixesha i recieve la macebiso?
Ngaba u hlawula usebenzisa bank transfer okanye Western Union?
Ingaba niyazinika ukuba babheje / qinisekisa?
Ndifuna ukujoyina into shoud ndenze ntoni na?
1.SoccerBetShoot amabala inkonzo zicazulule inika iingcebiso yebhola ekhatywayo iingcebiso ngezizathu data olunzulu, ekwakusetyenzwa ziingcali ukuba iziganeko ezithile (midlalo, lemidlalo etc)
2.Iqela lethu leengcali liya kuba umncedisi wakho kwihlabathi ukuqinisekisa uqikelelo ibhola, imidlalo fixed Kuyanceda ukwazi ngakumbi, ingqalelo iingozi kunye nokwenza izigqibo ezifanelekileyo.
3. SoccerBetShoot iqela ujongile bookies odi imini nobusuku, bafune ulwazi malunga amaqela kunye nabadlali, nokuhlalutya yonke imidlalo and amaqela, ezo amelwe zethu uqikelelo itikiti football. Xa kuthengwa impahla okanye kubhejo ufumana nokuhlaziya siphathelele oluzayo nokuba ekhatywayo amacebiso izincomo, elungiswe ochwepheshe bethu.
Ngaloo ndlela, ungafumana ukuba ukwazi data, esetyenziselwa ukwenza iingcebiso ze enze isigqibo ngokwakho ngendlela onokuzisebenzisa ngayo. Oku kuya kunceda bettors abanamava ukusebenzisa izimvo zeengcali nisekelwe kwaye ugcine ixesha, ngelixa rookies kunye bettors abangenamava uya kufumana ithuba lokuba ukwandisa ipesenti ekuzuzeni level up.
Thina amacebo ezintathu ezahlukeneyo, ukuthenga elinye phakheji (ixesha unikele), imidlalo eyodwa kwisiseko imihla hleze yokugqibela kodwa SUBSCRIBE CORRECT SCORE .
Emva isiqinisekiso senkokhelo,asikwazi ukunika nayiphi na imali phantsi kwazo naziphi na iimeko.
SoccerBetShoot ayinikeli naluphi na uvavanyo free ngaphandle kwezinye football ezamahala uqikelelo ukubheja gqwa. Enye into ebalulekileyo ukuze ukhumbule ukuba ube ufumana 100% ibhonasi sokudipozitha wokuqala okanye ukuthenga emva registration.SoccerBetShoot kwakhona ibonelela inkqubo ukunyaniseka: iklayenti elide usebenzisa iimveliso zethu, iimpawu ngaphezulu ibhonasi (nokhunye, tips football , amatikiti kunye nezinye ezininzi) uvuka for free.
Iingcebiso zinikelwe ngekhompyutha nge email, yaye tips ukubheja baya kuba bekulungele ubuncinane 6 iiyure ngaphambi kwemidlalo.
indlela yokubhatala nge pay kwintanga, uwestern Union, skrill, payoneer, neteller.
Ewe ekungasondezwa nakanjani-liqinisekisiwe Amathuba okuba eliphezulu uqikelelo ezizodwa ekhatywayo – amacebiso ngendlela 95%
1.Unga subscribe correct score okanye ukuthenga yethu eyodwa, ezizodwa okanye itikiti lifana unikele. Unako ukuhlawula online ne-Visa, MasterCard okanye usebenzisa Western Union, Money Gram. If you create account, you will get an opportunity to keep an eye on statistics of packages and bets in account manager set e-mail notifications about the time, xa kubhejwa ezithengiweyo kunye iiphakheji kufumaneka.
2.Ngaphezu, uya kufumana 100% ibhonasi imali imali okanye ihlawulwe, emva kokuba zonke agcwalisa okanye ukuthenga imveliso emva kobhaliso. SoccerBetShoot ikwabonelela inkqubo ukunyaniseka: iklayenti elide usebenzisa iimveliso zethu, iimpawu ngaphezulu ibhonasi (nokhunye, kubhejwa, amatikiti kunye nezinye ezininzi) uvuka for free.